Akanikwe ithuba uKhune kwiChiefs, kusho uKhuzwayo - Impempe
May 23, 2022 Impempe.com
Owayengunozinti weKaizer Chiefs, uBrilliant Khuzwayo, uthi akekho unozinti okhaliphe ukwedlula u-Itumeleng Khune osemabhukwini Amakhosi.
Njengamanje uKhune akadlali kwiChiefs, kanti uKhuzwayo ufisa anikwe ithuba ngoba lokhu kuyamlimaza kakhulu. Uphinde wagxeka u-Ernst Middendorp wathi nguyena umqeqeshi obulale uKhune ngokungamdlalisi, nokubukela phansi abadlali baseNingizimu Afrika.
“Baningi abadlali ababulawe ngabaqeqeshi abamhlophe kade bedlala ibhola elihle,” kusho uKhuzwayo.
“Abaliqondi ibhola lakuleli, bafundela ibhola kithina. Kuyangimangaza ngoba iMamelodi Sundowns inonozinti abakhulile kodwa bayavimba.
“Lapha sibala uDenis Onyango noKennedy Mweene. Manje kanti ngempela yini esiyidingayo ngebhola lethu?”
Akwaziwa ukuthi kuzogcina kwenzekeni kuKhune njengoba sekuphele isizini ka-2021/2022. Kulindeleke ukuthi iChiefs idedele abadlali abaningi ngaphambi kokuthi kuqale isizini entsha.
“Kuyimanje onozinti bayashabalala eMzansi ngenxa yokunganikwa ithuba ngokwanele. Uma ubheka emaqenjini amakhulu kudlala onozinti bangaphandle. Kuze kube ngcono kwiGladAfrica Championship ne-ABC Motsepe League.
“Asinabo onozinti abadlala emazingeni aphezulu phesheya kwezilwandle ngenxa yokuthi abanikwa ithuba.”
Kukhona amahlebezi okuthi uKhune uyagqugquzelwa ukuthi ayozama inhlanhla kwiRoyal AM njengoba engadlaliswa kwiChiefs.
UKhuzwayo uphinde watshela iMpempe ukuthi akasoze abe ngumqeqeshi wonozinti noma kungathiwa ubizwa yiliphi iqembu. Uthe uzogxila ekuthuthukiseni ezemidlalo emazingeni aphansi.
Previous Previous post: I-PSL seyinqumile ngeyeDStv Premiership emisiwe eThekwini
Next Next post: Kuphazamiseke izinhlelo zeDowns zomdlalo neThwihli Thwahla